ကလေးငယ်များကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကင်းစွာ ပျော်ရွှင်စေလိုလျှင် – BurmeseHearts
ကလေးတိုင်းတူပေမယ့် စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်စွာ အကောင်းမြင် ပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တတ်တဲ့ကလေးတွေ ကွာခြားသွားကြတာ မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ် နားလည်ပေးနိုင်မှု ၊ အချိန်ပေးနိုင်မှု ၊ မေတ္တာပေးနိုင်မှု နဲ့ နွေးထွေးစွာဖြည့်ဆည်းပေးမှုအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။
မိခင်လောင်းတို့ ….. စာဖတ်ခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့ချစို့
BurmeseHearts	 Jun 24, 2015 0
ကြောင်၏ ကျင်ကြီး ၊ ကျင်ငယ်များကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ ဘာကြောင့်…
ထက်မြက်တဲ့ကလေးနဲ့ သာမာန်ကလေး ဘယ်လိုကွဲပြားသွားတာလဲ?
အခြားအကြောင်းကြောင့် သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်တတ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေ ရှိသလား?
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ …
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စမှာ ဘာကြောင့် ပျို့အန်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေရသလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော လက္ခဏာများ အပိုင်း(၁)